Into eyaziyo ngaphandle kweenzwa yim.
Vol. 5 JULAYI, 1907. 4
SIYAYIHLA KAKHULU kwaye siyayiva kwaye siyayibona kwaye siyiva; Siphila kwiimvakalelo, sisebenza ngeemvakalelo, sicinga ngeemvakalelo kwaye sihlala sizichaza ngeempawu, kodwa kunqabile okanye singaze sithandabuze imvelaphi yeemvakalelo zethu, nokuba abahlali bahlala njani kuzo. Siyahlupheka kwaye siyonwabele, sizabalaza kwaye sisebenzela ukondla nokwanelisa imizwa; Sicinga kwaye sicwangcise kwaye sisebenzela ukufezekisa iinjongo zethu ngaphandle kokuqonda ukuba zonke ezi bhongo zinxibelelene nemizwa kwaye singabasebenzi bazo. Sakha iingcinga ezisisiseko sembono evuselela inkanuko. Iinjongo ziba zizithixo kwaye thina sinqula izithixo. Inkolo yethu yinkolo yeemvakalelo, imizwa yoothixo bethu. Sakha okanye sinyula isithixo sethu ngokwendlela esiliva ngayo. Siyawubeka phantsi kunye neempawu zengqondo, kwaye sinqule ngokuzinikela ngeendlela zamava ethu. Sifundisiwe kwaye senziwe inkcubeko ngokobungakanani bethu kunye nokhanyiselo lweli xesha siphila kulo; kodwa inkcubeko yethu kunye nemfundo yenzelwe ukuhlawula irhafu kunye nembeko kwiimvakalelo zethu ngendlela yobugcisa kunye nobuhle, nangokweendlela zesayensi. Inzululwazi yethu yinzululwazi yeemvakalelo. Sizama ukubonisa ukuba izimvo zizimo ezinomdla kuphela kwaye iinombolo ngamanani aqokelelweyo ukulungiselela ukubala kwaye asetyenziselwe ukufumana ukonwaba kunye nokuzonwabisa kweempawu zeli xesha siphila kulo.
Ekhohlo kwiimvakalelo kufuneka sijikelezwe kwaye sivaleleke ngaphakathi kwihlabathi leemvakalelo zethu; kufuneka sondle, senze, siphile kwaye sife njengezilwanyana kwihlabathi leemvakalelo zethu. Kodwa kukho u "Ndi" ngubani ohleli ezingcingeni - apho iimvakalelo zixhomekeka kubuthathaka bazo bemvakalelo-kwaye nangona iimvakalelo zezenkosi zakhe ezikhoyo, kuya kubakho umhla apho u "Ndi" eyovuka kwimbonakalo yakhe kwaye iya kusuka kwaye ilahle imixokelelwane yeemvakalelo. Uyakuliphelisa ixesha lakhe lobukhoboka kwaye abize amalungelo akhe obuThixo. Ngokukhanya ukukhanya kwakhe okubonakalayo uya kuwasusa amandla obumnyama kwaye abususe ubuqaqawuli beemvakalelo ezazimfamekisile kwaye zamenza ukuba alibale imvelaphi yakhe yobuThixo. Uya kuthi cwaka, woyise, aqeqeshe, kwaye akhulise amandla okuqonda kwaye babe ngabakhonzi bakhe abavumayo. Ke "Ndiya" njengokumkani waphezulu alawule ngobulungisa, uthando nobulumko kwindalo yeemvakalelo.
U "Ndi" ke uya kwazi ngomhlaba ngaphakathi nangaphaya kweemvakalelo, ongumthombo wezinto zonke zikaThixo, kwaye uya kuba nenxaxheba kubukho obungenakukhanyelwa obunye bokwenyani kwizinto zonke-kodwa kuthi, ngelixa simfanyekiswe amehlo iimvakalelo, azikwazi ukubona.
Kwisiqalo sendalo yonke into ethile enomahluko phakathi, kunye nophawu lwayo olunye, ubumbini, ibonakalisa njengombandela womoya. Ukusuka nanjengezinto zomoya kuveliswa onke amandla. Yiyo ke le nto indalo ibekho ngaphandle kwendalo. Ngelixa lokudodobala kwamandla okuvelisa izinto njengezithuthi zazo. Umkhosi ngamnye unesithuthi esihambelanayo. Le moto okanye into ebonakaliswa ngayo amandla amakhulu. Licala elingemva kwamandla alo, njengoko umoya nezinto ezinento yokwenza nomoya ziziintshaba ezichasene nale nto. Onke amandla kunye nezinto azibonakalisi ngaxeshanye ekuqaleni, kodwa abonakalisi kuphela kwaye kwinqanaba elivelise ngalo iimeko zokubonakala. Kukho amandla asixhenxe, kunye nezithuthi zawo ezingqinelanayo, izinto ezisixhenxe. Oku kuyila indalo kwindalo yayo kunye nokuvela kwayo. I-zodiac ibonisa le meko kunye nokuvela kwezinto kwimpawu zayo ezisixhenxe ukusuka kumhlaza (♋︎) ngendlela ye-libra (♎︎) ukuya kwi-capricorn (♑︎). Ekuqaleni kwexesha lokuqala (umjikelezo) wokubonakaliswa, kodwa amandla athile aziveza kwaye achaza into ethile. Eli nqaku kamva lisebenza njengendlela yokubonisa amandla esibini kwinto yesibini yayo. Kwixesha ngalinye (ngeenxa zonke) amandla ongezelelweyo kunye nophawu lwento. Indalo yethu yangoku idlulile kumaxesha amathathu amnandi kwaye ngoku ikwesine. Imizimba yethu sisiphumo sokungqubana kwamandla kunye nezinto zazo ezibonakalayo kwaye ziya kubonakala. Kwithuba lesine kukutshintsha kwezinto ukusuka kwindalo ukuya kwindalo.
Ngokudalwa kwezinto, imizimba iyaveliswa enxibelelana nezinto kunye nezinto ezisebenza ngazo. Izinto ezifakwa emzimbeni zingene kwiimvakalelo zomzimba olungelelanisiweyo. Iimpawu zethu kukudibana kunye nokudibanisa kwezinto emzimbeni omnye. Ingqondo nganye inxulumene nenxalenye ethile yomzimba eyilungu layo kunye neziko elithile elisebenzisa ngalo ingqondo kwinto yalo ehambelana nalo kunye nento leyo ethi isebenze kuyo. Kungoko bekubandakanyekile izinto zomlilo, umoya, amanzi nomhlaba; kwaye eyesihlanu ngoku ivelisiwe njenge-ether. Iimvakalelo zesithandathu kunye nesixhenxe ngoku zikhoyo, kwaye kusafuneka ziveliswe ngamalungu abo ahambisanayo kunye namaziko emzimbeni. Amandla asebenza ngezinto zomlilo, umoya, amanzi, umhlaba kunye ne-ether ukukhanya, umbane, amandla-ongekabikho igama lesayensi, umazibuthe kunye nesandi. Iimpawu ezihambelanayo zezi: ukubona (umlilo), ukuva (umoya), ukunambitha (amanzi), ukubetha (umhlaba), nokuchukumisa okanye ukuva (i-ether). Amalungu ezi zinto entlokweni liliso, indlebe, ulwimi, impumlo nolusu okanye imilebe.
Ezi zinto zinamandla azo zizinto, aziyongxaki-izinto. Badityaniswa kwaye bamanyene ukuvelisa umzimba womntu kunye nemvakalelo yawo.
Phantse zonke iintlobo zezilwanyana zinikwe iimvakalelo ezintlanu, kodwa akukho nqanaba linye kwindoda. Iimpawu zesilwanyana zilawulwa kwaye zilawulwa ngezinto ezihambelana nazo, kodwa emntwini u "Ndi" zibonelela ngokuchasana nolawulo lwezinto. Iimpawu zesilwanyana zibonakala zinobuhle kunezomntu. Kungenxa yokuba izinto zihlangana nje kungekho kuphikiswa xa zisenza isilwanyana, kwaye ke isilwanyana sikhokelwa ngokwenyani zizinto. Iimpawu zesilwanyana ziyayazi nje into yazo, kodwa u "Ndi" emntwini uthandabuza isenzo seemvakalelo zakhe njengoko bezama ukuzinxibelelanisa naye, kwaye ke kuye kubekho ukudideka okubonakalayo. Ukuchasana okungaphantsi ko "I" kubonelela kwizivimba ezifumaneka kuyo kuya kungqinisisa ngakumbi ukuba izinto ziyakhokelela kwiimvakalelo, kodwa ukuba izinto eziyikhokelela kuyo indoda ngokwamandla ayo akanangqondo kwaye ayinabutyala. Ukusondela kwindalo umntu uhlala ngokulula ngakumbi uya kusabela kwaye akhokelwe yindalo ngokusebenzisa amandla akhe okuqonda. Nangona indoda yamandulo ibona kwaye yeva ukuhambela kude kwaye ivumba layo kunye nokunambitheka kwalo kuhamba kakuhle kwimigca yendalo, ukanti akakwazi ukwahlula phakathi kwemibala kunye nemibala yombala, umzobi awubonayo kwaye awuxabise xa ubuka nje, kwaye akanakho ukwahlula umahluko weetoni kunye nokuhambelana Imvumi ayaziyo, ayinawo nomnqweno wokungcamla okhulelweyo yipilice, okanye ingcali yokuvavanya i-Teyiphi, kwaye ayikwazi ukubona umohluko kunye nobuninzi bevumba elinokuthi umntu aluqeqeshe ekubetheni kwakhe.
Umntu uphuhlisa umbono wesithandathu ongenazo izilwanyana. Obu bubuntu okanye imvo yokuziphatha. Ingqondo yokuziphatha iqala ukuphakama kumntu wokuqala kwaye ibe yinto ebalaseleyo njengoko umntu ephucula ekuzaleni nasekufundeni. Into ehambelana nale ngqondo ayinakubonwa ngumntu nangona ikho, kodwa amandla awasebenzisayo ngokusebenzisa ubuntu kunye nokuziphatha kuyacingwa, kwaye kucingelwa ukuba kuvuka ngaphakathi kweempawu zomntu "I" wangempela leyo yingqondo yesixhenxe, ingcinga yobuntu, ukuqonda kunye nolwazi.
Imbali edlulileyo yendalo yethu, yokuqalwa kwezinto zezinto zendalo nayo yonke impilo yezilwanyana, yenziwe kwakhona ekwakhiweni komzimba womntu. Ukuqalwa kwezinto eziza kuphela esiphelweni ngokuzalwa kunye nokuvela kweengqondo kuyaqala. Ukuphuhliswa ngokuthe ngcembe kweethamsanqa kubuhlanga obugqithileyo kunokufundwa kakuhle ngokuqwalaselwa ngononophelo komntu, ukususela ekuzalweni kuye ekungazalisekisweni ngokupheleleyo njengendoda. Kodwa indlela engcono kwaye eqinisekileyo yokufunda indlela i-sensives eyaphuhliswe ngayo kukubuyela kwixesha lobuntwana bethu kwaye sibukele indaleko yethutyana yeengqondo zethu kunye nendlela esisebenzise ngayo.
Umntwana yinto emangalisayo; Kuzo zonke izinto eziphilayo yeyona iluncedo. Onke amandla omhlaba abizelwe ukuba ancedise ekwakhiweni komzimba omncinci; ngokuqinisekileyo yi "Nqanawa kaNowa" ekuyo izibini zobomi kunye nayo yonke into. Amarhamncwa, iintaka, iintlanzi, izilwanyana ezirhubuluzayo, kunye nembewu yobomi bonke zigcinwe kwindalo iphela. Kodwa ngokwahlukileyo kwenye indalo yezilwanyana, usana lufuna ukukhathalelwa rhoqo kunye nokukhuselwa kangangeminyaka emininzi, kuba alunakukwazi ukuzinceda okanye luncedo. Isidalwa esincinci sizalelwe kwihlabathi ngaphandle kokusebenzisa amandla alo; kodwa ngekamva lokwenza ukuba liviwe xa lifika kwaye lifune ingqalelo.
Xa kuzalwa usana alunayo nayiphi na imvakalelo yalo. Ayikwazi ukubona, ukuva, ukuva, nokuva, okanye ukuva. Kuya kufuneka ifunde ukusetyenziswa kweempawu nganye kwezi, kwaye iyenza ngokuthe ngcembe. Zonke iintsana azifundi ukusetyenziswa kweemvakalelo zazo ngokulandelelana. Ngokumamela kuqala kuza kuqala; nabanye, ukubona kuqala. Ngokubanzi, nangona kunjalo, usana luzazi kuphela njengephupha elingaziwayo. Inxalenye nganye yovakalelo lwayo ivulwa ngokungathi yothuswa, iveliswe kukubona okanye ukuva okokuqala, oku kuziswa ngunina okanye ngumntu othile okhoyo. Izinto zenziwe mnyama kwiliso leentsana, kwaye akukho ndlela inokuzibona ngokucacileyo. Ilizwi likanina livakala kuphela njengomsindo okanye enye ingxolo evusa ilungu layo lokuva. Ayikwazi ukwahlula ivumba kwaye ayinakho ukungcamla. Isondlo esathatyathwa sisusa ekuvuseleleni kweeseli zomzimba, ezinemilomo nje kunye nesisu, kwaye ayinakuziva nangayiphi na into ngqo okanye ifumane naliphi na ilungu lomzimba wayo. Ekuqaleni ayinakuvala izandla zayo nayiphi na into, kunye nokuzama ukuzondla ngamanqindi. Ukungaboni kuyakubonwa kukungakwazi kwakhe ukujonga amehlo kuyo nayiphi na into enikiweyo. Umama kufuneka ayifundise ukubona nokuva, njengoko imfundisa ukuba yondle. Ngamazwi aphindaphindwayo kunye nezimbo zomzimba uzama ukutsala ingqalelo yakhe. Ngomonde umama ujonge ngamehlo ayo aqaqanjelweyo ngenjongo yokujonga ukwamkelwa, kwaye iiveki okanye iinyanga zidlula phambi kokuba intliziyo yakhe yonwabe ngoncumo olukrelekrele. Xa iqala ukukwazi ukufumana isandi ishukumisa imilenze yayo emincinci ngokukhawuleza, kodwa ayikwazi ukuyifumana isandi. Ngokwesiqhelo kunye nendawo yesandi kuza umbono wokubona xa into ethile eqaqambileyo isuswa phambi kwamehlo ayo okanye ingqalelo yayo itsaleleka kwinto ethile. Umntu obukele ngenyameko oye walandela ukukhula kwalo naluphi na usana akanakusilela ukuqonda ngezenzo zalo xa ngaba enye yezi mvakalelo isetyenziswe kakuhle. Ukuba ithoni esetyenzisiweyo xa uthetha nayo inobumnene kwaye imnandi iya kuncuma, ukuba krwada nomsindo iya kukhwaza luloyiko. Ixesha apho into eqala ukubona into inokubonwa ngokujonga okuhambelanayo kokumkelwa kwayo into eyithandayo. Ngeli xesha amehlo aya kubonakala egxile ngokufanelekileyo; ngamanye amaxesha ngaphandle kwalapho ibona ngamehlo ukuba ayigxilwe. Sinokumvavanya umntwana ukuba ayabona na kwaye ayive na enye yezinto zokudlala eziyithandayo, irocket. Ukuba sixhawula i-rattle kwaye umntwana uyayiva kodwa ayiboni, iya kuzolula izandla zayo nakweyiphi na indlela ikhabe ngokukrakra, enokuthi okanye ingangabi kwicala le-rattle. Oku kuxhomekeke kumandla ayo okufumana isandi. Ukuba iyayibona intyatyambo iya kuthi kwangoko ijolise amehlo ayo kwi-rattle kwaye ifikelele kuyo. Ukuba iyayenza okanye ayiboni ibonakaliswa ngokuhambisa i-rattle kancinci kancinci emehlweni kwaye ikhuphe kwakhona. Ukuba ayiboni, amehlo aya kubonakalisa ukungaboni nto. Kodwa ukuba iyabona ziya kutshintsha ekugxileni kwabo ngokusondele okanye kumgama wethontele.
Ukunambitha yingqondo elandelayo. Ekuqaleni usana alukwazi ukubonisa ukuthanda kwalo amanzi okanye ubisi okanye iswekile okanye okunye ukutya okungakunyanzeliyo okanye ukutshisa iiseli zomzimba. Kuya kukuthatha konke ukutya ngokufanayo, kodwa ekuhambeni kwexesha kubonise ukuba kukhethwa omnye ngaphezulu kwabanye ngokulilela oko xa ukutya okuthile kurhoxisiwe ngequbuliso. Ke, umzekelo, ukuba iqhekeza leklasi libekiweyo emlonyeni walo liya kukhala ukuba ipipi lisuswe kwaye alizukuvuselelwa ngubilini okanye ngobisi. Kodwa ingqwalaselo yayo inokususwa kwimbonakalo yayo yokungcungcuthekisa ngokungcungcutheka okanye ngokudanisa into ekhanyayo phambi kwamehlo ayo. Ingqondo yokuhoya ifunyenwe ngumbonisi ngokuzisa ivumba elithile, ukhetho oluya kuboniswa ngoncumo, ifrown, okanye umntwana opholileyo.
Imvakalelo iphuhliswa ngokuthe chu kwaye ngokuhambelana nezinye izivamvo. Kodwa umntwana akafundanga ixabiso lomgama. Iya kufikelela enyangeni okanye kwelinye isebe eligudileyo lomthi ngokuzithemba okukhulu njengoko kuya kufikelela kwimpumlo kanina, okanye iindevu zikayise. Amaxesha amaninzi iyakhala kuba ayikwazi ukuqonda inyanga okanye into ekude; kodwa ngokuthe ngcembe ufunda ixabiso lomgama. Ayenzi, nangona kunjalo, ifunde ngokulula ukusetyenziswa kwamalungu ayo, kuba iya kuzama ukuzondla ngeenyawo zayo okanye i-rattle okanye nayiphi na into yokudlala. Akukho kude kudlule iminyaka emininzi apho kuya kuyeka ukuzama ukubeka yonke into ngaphakathi komlomo.
Izinzwa zikubomi bokuqala obulawulwa zizinto njengoko zinjalo nakwizilwanyana. Kodwa kolu lutsha ubutsha iimvakalelo azikhuli ngokwenyani; kuba, nangona zikho izinto zokuphumela ngaphandle kolawulo oluqhelekileyo, iimvakalelo aziqali ngokusetyenziswa nobukrelekrele de kube lixesha lokufikisa; emva koko kuqalisa ukusetyenziswa kweenqobo zokwenyani. Kulapho ke ukuba isimilo sokuziphatha, ubuntu buqale, kwaye zonke iimvakalelo zithathe intsingiselo eyahlukileyo kweli nqanaba ekukhuleni kwabo.
Njengoko kukho amandla asebenza kwizithuthi zawo, izinto zawo, kukwanjalo kukho imigaqo enxibelelene nokwenza kunye nokusebenza kweenzwa kunye namalungu abo. Ekuqaleni into yokuqala yayingumlilo, amandla okuqala abonakalisa ukukhanya okwakusebenza kwinqwelo kunye nezinto zawo, umlilo. Kwisiqalo somntu ukukhanya njengomlilo kwindalo iphela yingqondo, ethi, ekuqalekeni ikwimo yesidala, ibenayo ngokwayo iintsholongwane zazo zonke izinto eziza kuphuhliswa ikwabeka umda wokukhula kwayo. . Umbono wayo ngumbono kunye nomzimba wayo liliso, ekwangophawu lwawo.
Kuza kusebenza ukusebenza kwamandla, umbane, ngokusebenzisa umoya. Emntwini umgaqo ohambelana nobomi (prana), kunye nokuva kwawo okuhambelana nokuva, kunye nendlebe njengesixhobo sayo. Amandla "Amanzi" asebenza ngokusebenza kwamanzi, kwaye ngokuhambelana kwawo umgaqo-siseko wefomathi yomzimba (umzimba we-astral okanye we-linga sharira), kunye nengcinga yawo, loo nto yokungcamla, kunye nomzimba wayo ulwimi.
Amandla amandla kazibuthe asebenza ngokusebenzisa umhlaba ophantsi, kwaye inemigaqo yawo ehambelana kunye nengqondo emntwini, ngokwesondo (umzimba wenyama, i-sthula sharira) kunye nokunuka, ngeempumlo njengento yayo.
Amandla esandi asebenza ngeenqwelo zayo. Emntwini imigaqo ehambelanayo ngumnqweno (kama) kunye nokuva kwayo, kunye nolusu kunye nemilebe njengezitho zayo. Ezi mvakalelo zintlanu ziqhelekile kwizilwanyana kunye nasendodeni ngokufanayo, kodwa kumanqanaba ohlukileyo.
Ingqondo yesithandathu yinto eyahlula isilwanyana emntwini. Ingqondo iqala, nokuba yeyomntwana okanye eyindoda, kunye nengqondo ye-I-am-ness. Emntwaneni kuboniswa xa umntwana esiba yinto ebizwa ngokuba “kukuzazi.” Umntwana oqhelekileyo, ofana nesilwanyana sendalo okanye indoda yendalo, akazinzanga kwimikhwa yayo, kwaye akoyiki kwaye aqinisekile ekuziphatheni kwayo. Ngokukhawuleza xa sele iyazi ngesiqu sayo, nangona kunjalo, ilahlekelwa yiyo impendulo yendalo yeemvakalelo kwizinto zayo zangaphandle, kwaye izive ithintelwe yimvakalelo yayo ye-I.
Xa ujonga ixesha elidlulileyo umntu omdala akakukhumbuli ubuninzi bezinjongo kunye nobukho bendibubangele kwiimvakalelo zakhe. Ukuqonda ngakumbi ukuba ndiyazi, kobuhlungu obungakumbi obuya kubangela kwintlangano enovelwano. Oku kubonakaliswa ngakumbi yinkwenkwe okanye intombazana ekufikiseni kwabo kwishumi elivisayo. Ke intsingiselo yesithandathu, isimilo okanye isimo sengqondo sobuntu, iyaqinisekiswa ngenxa yokuba mna ndinolwalamano oluhle nomzimba ngakumbi kunokuba yayinjalo ngaphambili. Ngeli xesha ukuba umgaqo wokucinga usebenza ngokusebenza kwayo, ingqondo yokuziphatha okanye ubuntu. Ngale ndlela ubuntu ububonisa nje i-I, imaski ye-I, i-ego ebubuxoki. Ndim ubuqu okanye umgaqo ogqityiweyo wengqondo, ohambelana nomzamo wokuqala wengqondo wokuzibonakalisa ngokwengqondo yawo wokuqala, ukubonwa, ngamandla ahambelanayo okukhanya kunye nencini yomlilo.
Iimvakalelo zimelwe kwi-zodiac. Ukuba ububanzi butsaliwe kumhlaza womqondiso (♋︎) ukuya kwi-capricorn (♑︎), imehlo entloko likumgca othe tyaba kule zodiac ohlulahlulahlula indawo kwinxalenye ephezulu nangaphantsi. Inxalenye ephezulu ye-zodiac okanye entloko ayibonakali, ngelixa icala elingaphantsi le-zodiac okanye entloko libonakalisiwe kwaye libonakalisa isiqingatha. Kweli nqanaba libonisiweyo lingezantsi kukho iindawo ezisixhenxe ezivulekileyo, ezibonisa amaziko asixhenxe, kodwa kungoku nje zisebenza iimvakalelo ezintlanu kuphela.
Imigaqo-siseko ebhengezwe ngu-Mme. I-Blavatsky kwiimfundiso ze-theosophical are, umzimba wenyama (sthula sharira), umzimba we-astral (linga sharira), umgaqo wobomi (prana), umgaqo-nkqubo wokunqwenela (kama), ingqondo (imana). Umgaqo wengqondo (imana) ngu-Mme. U-Blavatsky wathi ngowona mgaqo-siseko ohlukileyo, ekuphela kwento ekhankanywe kuye engonaphakade, kwaye ingowona mgaqo-siseko ungabonakaliyo uyazibonakalisa emntwini. Imigaqo ephezulu ayikabonakali, kwaye ke imelwe kwisiqingatha esingaphezulu se-zodiac; kodwa ngenxa yokuba imigaqo-siseko yile nto ibonakalayo kwindalo iphela kunye nomntu, imiqondiso ye-zodiac ibonisa indlela ekwenziwa ngayo lo mgaqo-nkqubo ngokunxibelelana nemigaqo ephantsi yokuhamba, ngolungelelwano lwendalo ukusuka ekujikeni nakwindaleko. Ke, umzekelo, ukuphefumla kokuqala kwengqondo, umhlaza (♋︎), ikhulisa intsholongwane yobomi, i-leo (♌︎), ethi ikhule ngokuthe ngcembe ibe yimo, virgo (♍︎), kwaye loluphi uhlobo oluchazwa ngokwesondo kunye nokuzalwa kwayo, libra (♎︎). Isini sayo sichazwa ngokuphuhliswa komgaqo wokunqwenela, i-scorpio (♏︎). Apha kuphela umntu oyinyama yokwenyama. Kodwa kukho izinto zangaphakathi, ezinjenge-clairvoyance kunye ne-clairaudience, ehambelana nokubona kunye nokuva. Ezi, kunye namandla engqondo, zinamalungu azo kunye namaziko okusebenza kwisiqingatha esiphezulu sentloko. Ingqondo kunye neempawu zayo kufuneka zilungiswe kwaye ziphuhliswe ngaphambi kokuba imigaqo ephezulu (atma ne-buddhi) isebenze.
Umntu uqala imvakalelo yesithandathu yobuntu kunye nokuziphatha okukhokelayo okanye okukhokelwa yingcinga, sagittary (♐︎). Njengoko ingcinga iba ngokokuziphatha ngokungqongqo, kwaye iimvakalelo zisetyenziswa kwimisebenzi yazo efanelekileyo kwaye isebenzisa ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, ingcinga njengobuntu kunye nokubonakaliswa kwe-I kuza kuhambelana neyona nto ndiyenzayo, ubuntu okanye ingqondo, ekugqitywa kwayo iimvakalelo ngokubiza ukusebenza ngamandla aphezulu engqondo. Umzimba obonakaliswa ubuntu kuwo kunye nokuqonda kokuziphatha kokusa kolu luhlu luboniswe ngumzimba wepituiti. Isitho esibonisa ubunye, i-capricorn (is) ngumngundo wepayina. Njengelungu lomzimba ubekwa ngasemva naphakathi phakathi kwamehlo. I-pineal gland ngasemva nangaphezulu kwayo. Amehlo afuzisela la malungu mabini alele emva kwawo.
Ezi mvakalelo zethu ngelixesha usebenza ngamaziko okanye amalungu entloko ayizizo nje iingozi, okanye lithuba-lokuzivelela kwendalo. Zombini zizikhululo ezamnkelayo nezisebenzayo apho umntu ocinga, umntu, anokufumana khona imfundiso, kwaye alawule okanye aqondise amandla nezinto zemo yendalo. Kananjalo ayisiyonto eyokuba imiqondiso ye-zodiac ikukungqinelani kwamagama amazulu athile ezulwini. Iinkwenkwezi ezisesibhakabhakeni ziimpawu ezifana neeplanethi zethu. Iimpawu zodiac zimele iindidi ezininzi okanye ii-odolo. Kwintloko yeklasi nganye okanye kulungelelwano ubukrelekrele obungcwele kakhulu ukwenza ngaphezu kokuchazwa kuthi. Kubo bonke ubukrelekrele obunje oba khona ngokuthe ngcembe baqhubeka ngokulandelelana ngokulandelelana kwawo onke amandla kunye nezinto ezenza umzimba womntu, kwaye nganye inolungelelwano emzimbeni womntu njengoko kuchaziwe.
Iimvakalelo zahlukile kwinyaniso endiyiyo kwaye andinakuchongwa nayo. Njengoko ndifumana ukudibana nomzimba, izivamvo ziyakudyobha, ziyenze isela, ziyikhonkotha kwaye iphosa ubungangamsha bayo obujikeleze bungakwaziyohlula. Andiqondwa ziimpawu; iyachukumisa kwaye ayinakuphazamiseka. Njengoko ingena kwihlabathi kwaye idityaniswa neengqondo iyazichaza kunye nezinye okanye zonke iimvakalelo, kuba kukwilizwe lezinto ezibonakalayo apho iifom zingabikho nto yokuzikhumbuza, kwaye ayikabikho kude kube kudala ukubandezeleka kunye neehambo ezininzi ukuba ziqala ukuzichaza ukuba zahluke kwiimvakalelo. Kodwa ekuzameni kwayo ukwahlulahlula kuqala kuya kukhuthazeka ngakumbi kwaye kudukiswe.
Kwimo yomntwana okanye yendoda eyandulelayo yayinokusebenzisa kwendalo iimvakalelo zayo, kodwa ngayo ayizokwazi ukuziqonda. Ngokukhulisa kunye nemfundo izivamvo zaziswa kwinqanaba eliphezulu lophuhliso. Oku kumelwe ngamasebe ohlukeneyo ezobugcisa. Umzekelo, umzekelo, umtyibilikisi ucinga into echanekileyo kunye nobungakanani kwaye abumba udongwe lweplastiki okanye axhase imarble eqinileyo ibe ziimpawu ezihambelana nobuhle bakhe. Umzobi onemibala yokukhanya uqeqesha iso lakhe ukuba libone kunye nomgaqo wakhe wokucinga ukuba ukhulelwe ubuhle kungekuphela nje kodwa kodwa ngombala. Ubona ukungafani kwemithunzi kunye neethoni zombala umntu oqhelekileyo angakhange azithathele ingqalelo, kwaye eyendoda okanye umntwana wokuqala uyibona kuphela njengombala ocekeceke omnye umbala. Nditsho nendoda yemfundo eqhelekileyo ekujongeni ubuso ibona kuphela i-contour, kwaye ifumane umbono jikelele wombala kunye neempawu. Ukusuka kuhlolo olusondeleyo ubona into angenakumbiza njengawo nawuphi na umbala wombala; kodwa umzobi akafumaneki kwaphela kwibala lombala ngokubanzi, kodwa xa athe wahlola wabona imibala emininzi kulusu olungayikrokrelwanga ukubakho ngumntu oqhelekileyo. Ubuhle bendalo okanye umzobo ophunyezwe ngumculi omkhulu awuxatyiswa yindoda eqhelekileyo, kwaye ibonwa kuphela njengezibi yindoda okanye umntwana wokuqala. Isilwanyana asiyikhathaleli umbala, okanye siziva sinomdla saso. Umntwana okanye umntu wokuqala ngqa kufuneka aqeqeshelwe ngononophelo ukuqonda umbono weemibala zombala kunye nembono yepeyinti. Ekuqaleni umzobo ubonakala umane umphezulu othe tyaba ukukhanya okanye ubumnyama kwiindawo ezithile, kodwa ngokuthe ngcembe ingqondo iyawuxabisa umba ongaphambili kunye nomva wezinto kunye nomoya ongenelelayo, kwaye njengoko ifunda ukuxabisa umbala wehlabathi ubonakala wahlukile kuwo . Umntwana okanye indoda eyandulelayo iyayiqonda kuphela isandi ngemvakalelo okanye ngovakalelo oluvelisayo. Emva koko yahlula phakathi kwengxolo engafaniyo kunye nengoma elula. Emva kwexesha inokuqeqeshwa ukuze ivakalise izandi ezintsonkothileyo, kodwa kuphela imvumi yokwenene ekwaziyo ukwahlula nokuxabisa ukungavisisani kwimbonakalo yesingqisho enkulu.
Kodwa ubukhazikhazi obubangelwa kukuhlakulelwa kweenqobo bubopha ngakumbi kwizinzwa, kwaye bumenze abe likhoboka labo ngaphezulu kwalapha. Ukusuka kumkhonzi wabo othobekileyo ngokungazi, uba likhoboka labo elithembekileyo kunye nenkcubeko, nangona ngemfundo nangamasiko esondela ngexesha lokuvuka.
Inzwa nganye kwezi ezintlanu iphakamileyo okanye iphantsi ngokwendlela esetyenziswe ngayo bubuntu. Impucuko kunye nemfundo ziqhele ukubopha u-I kwiimvakalelo ukuba nje mna kunye namandla okuqiqa aya kusetyenziswa kwiziphelo ezibonakalayo kwaye ndinamathele kwihlabathi nakwiliphi na elicinga ngempazamo ukuba yimpahla yalo. Ilahleko, intlupheko, usizi, ukugula, usizi, inkathazo yazo zonke iintlobo, ndiziphose ngokwam kude neentshaba zazo ezitsala umdla. Emva koko kunokwenzeka ukuba ifunde intsingiselo kunye nokusetyenziswa kwangempela kweempawu. Iyafunda ke ukuba ayingoweli lizwe, ukuba sisithunywa esineenjongo kweli lizwe. Ukuze ngaphambi kokuba inike umyalezo wayo kwaye yenze umsebenzi wayo kufuneka iqhelane neemvakalelo njengoko zinjalo, kwaye ziyisebenzise ngendlela ekufuneka zisetyenziswe ngayo endaweni yokulahlekiswa nokulawulwa ngabo.
I Ndifunda ukuba iivisisi ngokwenene zizitoliki zelizwe kuyo, mna, kwaye kufanele ukuba zinikwe abaphulaphuli, kodwa ukuba kufuneka ndifunde ulwimi lwazo ukutolika, kwaye ndizisebenzise kanjalo. Endaweni yokuba ndikhohliswe yimpembelelo yabo, ndiye ndafunda ukuba ngolawulo lweemvakalelo kuphela olukwazi ukutolika indalo ngabo, kwaye ngolawulo lwabo, mna, lo, ndenza umsebenzi ngokunika ifomu kwabangafundanga. kunye nokunceda kumcimbi kwiinkqubo zayo zokuzimela kunye nokuvela kwendaleko. I endiqhubeka nokufunda ukuba ngasemva nangaphezulu kwezinto athetha kuzo ngeemvakalelo zakhe kukho ukuqonda kunye nezinto ezibonakalayo anokuthi anxibelelane nazo ngokusebenzisa amandla amatsha nangalasetyenziswanga akhoyo kwaye afunyenwe ngokusetyenziswa nolawulo olufanelekileyo lomzimba wakhe iimvakalelo. Njengoko amandla aphezulu (njengokuqonda nokucalucalulwa) aphuhliswa athabatha indawo yeemvakalelo ezibonakalayo.
Kodwa ndingayenza njani ukuba ndiyazi kwaye ndiyazi? Inkqubo onokuthi yenziwe yenziwe ichazwe nje ngokulula, nangona uninzi kunokuba nzima ukuyenza. Inkqubo yinkqubo yengqondo kwaye yinkqubo yokupheliswa. Ayinakwenziwa ngaxeshanye, nangona kunokwenzeka ukuba iinzame ziyaqhubeka.
Makhe lowo ebeya kuphumelela ekupheliseni iziva makahlale phantsi athule aze avale amehlo. Kwaoko kuya kungena ngokukhawuleza kwingqondo yakhe iingcinga zalo lonke uhlobo lwezinto ezinxulumene neemvakalelo. Myeke aqalise ukushenxisa enye yeemvakalelo, yitsho ngevumba. Ke makamshiyele umxholo wokungcamla, ukuze angazi nto anganuka okanye angcamle. Makaqhubeke ngokuphelisa imbono, oko kukuthi angazi ukuba ucinga nganto ngayo nayiphi na into ebume okanye ibala. Myeke kwakhona ayiphelise ingqondo yokuva, ukuze angazi ingxolo okanye isandi, kungabi nokuva ezindlebeni, nokujikeleza kwegazi emzimbeni wakhe. Myeke ke aqhubeke ngokuphelisa konke ukuziva ukuze angawazi umzimba wakhe. Iya kuqatshelwa ngoku ukuba akukho kukhanya okanye umbala kwaye akukho nto kwindalo yonke inokubonwa, ukuba ingcinga yokungcola ilahlekile, ingcinga yokuhoya ilahlekile, ukuba akukho nto kwindalo iphela inokuvakala, nokuba akukho ndawo kwindalo iphela ukungaziva kwanto.
Iya kuthiwa loo nto umntu okwee ukubona, eziva, ezinambitha, ezihoya kunye neemvakalelo ezinqunyulweyo akabikho, ukuba ufile. Lena Yinyaniso. Okwalo mzuzu ufile, kwaye akabikho, kodwa endaweni yobomi bangaphambili, kwaye endaweni yokuba abe nobomi obonwabisayo, NGUYE.
Oko kuhlala kusemva kokuba iimvakalelo zisusiwe ndim. Ngalo mzuzu mfutshane wexesha lomntu ukhanyiselwe kwi-Consciousness. Unolwazi lwe-I njengoko nam, eyahlukileyo kwizivakalayo. Oku akuyi kuhlala ixesha elide. Uya kuphinda azazi iimvakalelo, kwimbonakalo, ngokusebenzisa i-sensors, kodwa uya kubazi ukuba banjani, kwaye uya kuthwala inkumbulo yobunyani bakhe kunye naye. Unokusebenza ngoku kwaye ngokusebenzisa amandla okwazi ukuya kwixesha xa engasayi kuba likhoboka labo, kodwa uya kuba yena ngokwakhe ehlala eyedwa, uyakuhlala endilulamlo olufanelekileyo kunye neemvakalelo.
Umntu owoyikayo ukufa kunye nenkqubo yokusweleka akafanelanga ukubandakanyeka kolu qheliselo. Kuya kufuneka ukuba afunde uhlobo lokufa kunye neenkqubo zeengqondo ngaphambi kokuba ahambe ekhangele mna.